Maarso loogu talagalay rabshadaha ayaa ku socdaalaya Latin America - Maarso Adduunka
Bogga ugu weyn » Noticias » Isgaarsiinta Rasmiga ah » Maarso loogu talagalay rabshadaha ayaa ku socdaalaya Latin America
Maarso waxay ku dhex socotaa Multiethnic iyo Pluricultural Latin America ee Rabshadaha
Maaha wax ku cusub qofna in rabshado horay loogu rakibay meeraha oo dhan.
Laatiin Ameerika dadyowga, oo leh kala duwanaansho kala duwan, waxay ka tanaasulaan qaababka rabshadaha leh ee abaabulaya bulshooyinka una keenaya cawaaqib gaajo, shaqo la'aan, cudur iyo dhimasho, quusinta aadanaha xanuunka iyo silica. Si kastaba ha noqotee, rabshad ayaa qabsatay dadkeenna.
Rabshada jireed: Dilalka abaabulan, dadka oo la waayo, cabudhinta mudaaharaadka bulshada, femicides, ka ganacsiga dadka, iyo muuqaalada kale.
Ku Xadgudubka Xuquuqda Aadanaha: Shaqo la’aan, daryeel caafimaad, guri la’aan, biyo la’aan, tahriib qasab ah, takoorid, iwm.
Burburinta nidaamka deegaanka, deganaanshaha dhammaan noocyada: Meeg-macdanta, qulqulka agro-sunta, xaalufinta dhirta, dabka, daadadka, iwm.
Xusuus gaar ah waxay u dhigantaa shucuubta asaliga ah, oo, laga qaaday dhulkooda, u arka xuquuqdooda in lagu xadgudbo maalin kasta, oo lagu riixo inay ku noolaadaan takoorid.
Miyaynu beddeli karnaa jihada dhacdooyinka naadiya masiibooyinka aadanaha ee cabirrada weligood lama oga?
Dhammaanteen waxaan leenahay mas'uuliyad qaar ka mid ah waxa dhacaya, waa inaan go'aan gaarnaa, aan mideynaa codkeenna iyo dareenkeenna, fekerka, dareemidda iyo ku dhaqmidda isla jihada isbeddelka. Yaan laga sugin dadka kale inay sidaa yeelaan.
Mideynta malaayiin bini aadam oo kala luqado, jinsi, caqiidooyin iyo dhaqammo kaladuwan ayaa lagama maarmaan u ah in damiirka aadanaha lagu ifiyo iftiinka Rabshadaha.
Dunida aan Dagaalada iyo Rabshadaha Dunida, oo ah noole ka tirsan Dhaqdhaqaaqa Bini'aadamka, ayaa kor u qaaday isla markaana abaabulay kooxo kale, socod kuwaas oo u socdaalaya dhulalka iyagoo ujeedkoodu yahay kor u qaadista miyir-qab aan rabshad lahayn taas oo muujinaysa ficillada wanaagsan ee bini-aadam badani ku horumariyaan jihadaas.
Dhacdooyinka muhiimka ah ee arrintan la xiriira waxay ahaayeen:
2009-2010 Maarso Koowaad ee Nabadda iyo Rabshadaha
2017- Maarso Koowaad ee Bartamaha Ameerika
2018- Koofur Ameerika Maarso
2019- 2020. Maarso Labaad ee Adduunka
2021- Maanta waxaan si farxad leh ugu dhawaaqeynaa socod cusub, markan oo ah mid muuqaal iyo fool-ka-fool ah, dhammaan gobollada aan jecel nahay laga bilaabo Sebtember 15 illaa Oktoobar 2 - MARKA KOOWAAD LATIN AMERICAN- QABYAALAD-DHAQAN IYO QAAR-QAADO NOLOL-KA.
Maxaa loo socdaa?
Waxaan u soconaa tusaalaha ugu horeeya si aan nafteena ulaxariirno, maadaama dariiqa ugu horeeya ee socdaalku uu yahay wadada gudaha, fiiro gaar ah u leh dabeecadeena, si aan uga guuleysano rabshadaheena gudaha iyo inaan nafteena ula dhaqano si naxariis leh, dib uheshiisiin iyo hamigalin ah inaan ku noolaano wada noolaanshaha iyo wadista gudaha.
Waxaan socodsiineynaa Sharciga Dahabiga ah ee udub dhexaadka u ah cilaaqaadkeena, taas oo ah, ula dhaqanida dadka kale sida aan jeclaan lahayn in nalala dhaqmo.
Waxaan u soconaa barashada xallinta khilaafaadka qaab wanaagsan oo wax dhisaya, iyadoo la kordhinayo la qabsiga adduunkan aan fursadda u leenahay inaan ku beddelno.
Waxaan u amba baxnay socdaalka qaaradda, si shaqsi ah iyo shaqsi ahaanba, si aan u xoojino codka ka qaylinaya adduunyo badan aadanaha Kama sii arki karno silica intaa le'eg raggayaga kale.
Midoobaan dadka Latin Amerika, Kareebiyaanka, dadka asaliga ah, Afro-deganeyaasha iyo dadka deggan dhulkan ballaadhan, waxaan abaabulnay oo soconnay, si aan uga hor tagno noocyada kala duwan ee rabshadaha una dhisno bulsho adag oo aan rabshad lahayn.
Marka la soo koobo, waxaan abaabulnaa oo u soconaa:
1- Iska caabbinta iyo beddelka dhammaan noocyada rabshadaha ee ka dhex jira bulsheedyada: mid jireed, jinsi, hadal, cilmi nafsi, aragti, dhaqaale, midab iyo diin.
2- U dagaallama Kala-takoor la'aanta iyo fursadaha loo simanyahay siyaasad guud oo aan takoor lahayn, si loo hubiyo in si caddaalad ah loo qaybsado hantida.
3- Si loo caddeeyo Dadkeennii Dhaladka ahaa ee ku baahnaa Latin America oo dhan, iyadoo la aqoonsanayo xuquuqdooda iyo kaalintii ay ku lahaayeen awoowayaasha
4- Taasi waxay sheegaysaa inay ka tanaasulayso adeegsiga dagaalka qaab lagu xaliyo khilaafaadka. Hoos u dhac ku yimaada miisaaniyadda soo iibsiga dhammaan noocyada hubka.
5- Maya dheh rakibaadda saldhigyada milateri ee shisheeyaha, waxaad dalbataa in laga baxo kuwa hadda jira, iyo dhammaan faragelinta dhulalka shisheeye.
6- Kor u qaadista saxiixa iyo ansaxinta Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka (TPAN) ee gobolka oo dhan. Kor u qaadista abuurista heshiiska Tratelolco II.
7- Samee ficillo aan rabshad lahayn oo ku dhisan dhismaha Qaranka Aadanaha Caalamiga ah, oo la jaan qaada meeraheenna.
8- U samee goobo ay jiilalka cusubi ku muujin karaan naftooda kuna horumarin karaan, jawi bulsheed aan rabshad lahayn.
9- Kordhi wacyiga dhibaatooyinka deegaanka, kuleylka adduunka iyo halista halista ah ee ka dhalan karta qodista godadka furan, xaalufinta dhirta iyo adeegsiga sunta cayayaanka ee dalagyada. Helitaanka biyo aan xadidnayn, oo ah xuquuq aadane oo lama taabtaan ah.
10- Dhiirrigelinta gumaysiga dhaqan, siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhammaan dalalka Latin Amerika; Latin America bilaash ah.
11- Gaaritaanka dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka adoo tirtiraya fiisooyinka udhaxeeya wadamada gobolka iyo sameynta baasaboor muwaadin Latin America ah.
Taas waxaan ku hamiyaynayna anagoo booqanayna gobolka xoojinana midnimada Latin America, aan dib u dhisno taariikhdeena guud isku duubnaanta kala duwanaanta iyo Rabshadaha.
Bini'aadamka intiisa badan ma rabaan rabshad, laakiin baabi’inta waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn. Sababtaas awgeed, waxaan fahamsanahay taas marka lagu daro fuliyaan falalka bulshada, waa inaan ka shaqeynaa sidii aan dib ugu eegi lahayn waxa la aaminsan yahay taas oo ku xeeran xaqiiqadan la sheegay in aan la beddeli karin. Waa inaan xoojin doonaa iimaankeena gudaha ee ah inaan badali karno, shaqsi ahaan iyo bulsho ahaan.
Waxaa la joogaa waqtigii la isku xiri lahaa, la abaabuli lahaa oo loo socon lahaa Rabshadaha
Rabshadaha bisha Maarso illaa Latin America.
Macluumaad dheeraad ah: https://theworldmarch.org/marcha-latinoamericana/ iyo socodka iyo socodkiisa: 1da Maarso ee Latin Ameerika - Maarso Adduunka (theworldmarch.org)
Nala soo xiriir oo na raac:
Degso muujintaan: Maarso loogu talagalay rabshadaha ayaa ku socdaalaya Latin America